Ny Semalt dia manome antsipirihany amin'ny fomba fidiovana amin'ny Google Analytics Spam
Misy fiahiana ankapobe momba ny fifamoivoizana momba ny fifamoivoizana hita ao amin'ny Google Analytics. Ao amin'ny lahatsoratra manaraka, i Max Bell, Manager Semalt Tompondakan'ny Success Success, dia midika hoe inona no dikan'ny fifamoivoizana momba ny fifamoivoizana, izay midika ho an'ny tranokalanao, ary ny hetsika azonao atao mba hanesorana ilay olana.
Ny spam referrer dia hita ao amin'ny fizarana "Referrals" sy "Pageview" amin'ny Google Analytics. Izany dia miankina amin'ny karazana spam voatondro amin'ny tranokalanao. Tsy midika ho famangiana azy ireo marina izy ireo, ary mora ny mamantatra ny sasany aminy rehefa mampiasa URL mampiahiahy. Ny spam izay miseho amin'ny fanadihadiana dia hitondra ny iray amin'ireo endrika roa ireo:
Ghost Referrer Spam. Ny fitiliana ho an'ny famandrihana dia fitaratry ny fonosana ao amin'ny Google Analytics, izay ahafahan'ny mpandraharaha mandray an-tserasera rehefa misy offline, na amin'ny sehatra vaovao. Ny mpamorona dia afaka mandefa vaovao amin'ny GA raha tsy mitsidika ilay tranonkala. Tsy hay ny manakana ny mpitsidika matoatoa amin'ny fampiasana ny .htaccess raha tsy mijery ny tranonkala. Ny rakitra .htaccess dia fomba iray ampiasaina hanesorana ireo domains voafaritra ampiasaina hitsidihana ilay tranonkala. Ny fomba tsara kokoa hanesorana ny fitsangatsanganana ghost dia ny fanivanana azy ireo ao amin'ny Google Analytics mba ahafahan'izy ireo misafidy ny angona avy amin'ny mpampiantrano azy.
Fanamafisana ny mpitsoa-ponenana Ny ankamaroan'ny botsika mitsidika ilay tranonkala, mandika ny fitsipika napetraka ao amin'ny file robots.txt, ary miafara amin'ny tatitra Google Analytics ho toy ny ampahany amin'ny fifamoivoizana. Ireo botsiana dia mitsidika ilay tranonkala tsimoramora ao anatin'ny fotoana fohy, izay vokatr'izany dia miteraka ny tampony sy ny tontolon'ny fifamoivoizana. Ho an'ity karazana spam ity dia azonao ampiasaina ny rakitra .htaccess mba hanakanana ireo domains manokana. Ampiasao ihany koa ny fomba fanivanana mba hanilihana ireo loharanom-baovao azo avy amin'ny fanehoan-kevitra ao amin'ny GA.
Inona no antony anaovana izany?
Ny teboka amin'ny fitsidihana ny bitsika dia miverimberina ao amin'ny tatitra GA. Ny tanjon'izy ireo dia ny hananana ny sehatr'izy ireo eo amin'ny lisitr'ireo mpamadika. Rehefa hita ao amin'ny tatitra ireo rohy ireo dia mamela ny fahalianan'ny tompony izy ireo, te hahita ny antony mahatonga azy ireo hitondra fifamoivoizana be. Avy eo dia tsindrio eo amin'ny rohy ianao, raketinao ho mpitsidika ao amin'ny tranokalany. Manam-pananana ireo tompon'ireo tranonkala fa tsy tokony hiantehitra amin'ny rohy hafahafa raha toa ka mety ho mpanelanelana amin'ny virus virtoaly izy ireo.
Ny vokatry ny fitohanan'ny fifamoivoizana amin'ny tranokala
Tsy misy fiantraikany ratsy eo amin'ny tranokala ny fifamoivoizana Spam. Raha sendra ny Ghost, dia tsy tonga any amin'ny tranonkala mihitsy izy ireo mba ho ao anatin'ny fotoana fohy.
Ny fifamoivoizana momba ny fifamoivoizana dia manimba ny fomba fijerin'ny mpizahatany momba ny toetran'ny tranonkala toy ny firoboroboan'ny mpitsidika momba ny kalitao ao anatiny, ny fomba fifandraisany amin'izy ireo, ny fomba tsara indrindra hifehezana azy ireo.
Ny fifamoivoizana amin'ny spam dia mety hisy fiantraikany amin'ny taham-pitenenan-tserasera rehefa mamerina ny taham-pitenenana 100% izy ireo, ka mahatonga azy ho tsara kokoa noho izay mety ho izy. Na dia izany aza dia tsy hisy fiantraikany eo amin'ny pejin-tserasera amin'ny pejin'ny valin'ny fikarohana satria tsy mandray anjara amin'ny antsipirihan'ny Google Analytics i Google rehefa mamaritra ny fandaharana.
Misy tombony azo avy amin'ny tranokala avy amin'ny fifamoivoizana amin'ny spam?
Tsy misy tombony ho an'ny tranonkala na ny Analytics amin'ny ankapobeny raha tsy mahita ny fitomboan'ny fisehoana amin'ny pejy ianao .
Mialà amin'ny fifamoivoizana amin'ny spam
Atombohy amin'ny famoronana "Fahitana" vaovao ao amin'ny Google Analytics mba hahazoana antoka fa tsy manivana ny fizotran'ny fifamoivoizana ianao. Manana fomba fijery tany am-piandohana foana ho toy ny loharanom-baovao mivaingana, ary koa ny fiarovana amin'ny toe-javatra misy tsy mety. Kitiho ny takelaka "Vidéo" avy amin'ny fizarana Admin amin'ny mombamomba anao. Misy "menu-de-drop" menamena miseho ary "mamorona fomba fijery." Ampio tranokala, sehatra mety, ary famoronana manontolo ny fomba fijery vaovao. Kitiho ny "Home" mba hisafidy ny fomba fijerinao hampiharana ny sivana.
Ny dingana manaraka dia ny mamantatra hoe iza marina ny mpampiantrano ary ireo tsy izy ireo. Azonao atao izany amin'ny fisafidianana lisitra iray azonao atao amin'ny fidirana amin'ny fomba fijery. Araho ny fizarana (Audience> Technology> Network> Hostname).
Izao no fotoana hamoronana sivana vaovao ho an'ny takelaka Ghost. Safidio ny fomba fijery vao noforonina ary tsindrio ny "Filters," izay hiseho ny bitsika iray hampidirana iray vaovao. Omeo anarana ny sivana vaovao, ary ho azo antoka fa "Custom." Jereo ny boaty ho "Include" ary fidio ny "Hostname" ao amin'ny menio fanontam-pirinty ao amin'ny "Filalaovana Saha." Ampidiro ao amin'ny lamina fanivanana voasokajy ny fampiantranoana ny valin-kafatrao rehetra | tsy misy toerana. Ny * alohan'ny vondrona rehetra dia tokony hanampy amin'ny fanangonana ny faritra ao anatin'izany. Kitiho ny tahiry sy ny fivoahana.
Mamolavola sivana maromaro ary manaova ny "Exclude." Misafidiana "Loharano fanentanana" avy amin'ny "Saha fisakafoanana." Ny "Pattern Pattern" dia tokony ahitana ny lisitry ny sehatra spammy fantatra.
Farany, ilaina ny manaisotra ny fifamoivoizana amin'ny botsim-bidy tsara toy ny bot tamin'ny Google satria ny asany ao amin'ny tranokala dia mety hiseho ihany koa amin'ny fifamoivoizana Analytics. Eo ambanin'ilay sehatra vaovao noforonina, dia fidio ny safidy misy safidy amin'ny farany ambany mba hanivanana ireo boaty sy spider rehetra fantatra. Jereo ny boaty, ary aleo mandeha Source .